Ka Shaqaynta Dibedda: Waa kuwee Wadamada leh Xawaaraha Fiber -ka ugu sarreeya? | Safarka Absolut
Hadda ka dib kama fikirno annaga nolosha internet la'aan, midna guriga iyo mobilka toona. Ka dukaameysiga ecommerce, telefishinka, daalacashada shabakadaha bulshada, daawashada ciyaaraha tooska ah ama taxanayaasha baahinta ayaa ah qaar ka mid ah hawl maalmeedka aan hadda samayno iyo in ilaa wakhti aan sidaas u fogayn ay u muuqatay mid fog. Laakiin si aad u awooddo inaad waxaas oo dhan sameyso, waxaa lagama maarmaan ah in la helo xawaare internet oo wanaagsan. Waa kuwee dalalka leh xawaaraha ugu sarreeya ee fiber -ka adduunka?
Sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay Ookla American kaas oo lagu cabbirayo xawaaraha isku xirka internetka iyada oo loo marayo imtixaanka SpeedTest, sanadka 2021 dalka leh internetka ugu dhaqsaha badan ee go'an waa Monaco, oo celcelis ahaan xawlihiisu yahay 260 Mbps, waxaa ku xiga Asian Singapore iyo Hong Kong oo leh 252 iyo 248 megabyte, siday u kala horreeyaan.
Qayb ka mid ah internet-ka, waa Imaaraatka Carabta oo liiskan kaalinta koowaad kaga jira xawaarihiisa 193 megabytes. Qaaradda Yurub dhexdeeda, Norway (kaalka afraad) waa waddanka ugu horreeya ee xuduudahan leh celcelis ahaan xawaare dhan 167 Mbps.
Spain waxay ku jirtaa booska hoose labada xaaladoodba. Xawaaraha internet-ka ee go’an, dalkeenu waxa uu ku jiraa kaalinta saddex iyo tobnaad iyadoo celcelis ahaan xawaraha la soo degi karo uu yahay 194 Mbps, marka la eego dhanka internet-ka mobilada, Spain waxa ay ku jirtaa kaalinta 37aad iyada oo haysata 59 megabytes oo kaliya. Haddii aad rabto inaad ogaato waxa uu yahay xawaaraha intarneedka ee aad guriga ku leedahay, waxaanu kaa tagnay dhawr tijaabada xawaaraha.
Isticmaalayaal badan oo internetka ah ayaa adduunka ka jira. Tiradani waxay kor u kacday qiyaastii 4.665 milyan sanadka 2020, sida laga soo xigtay Ururka Isgaarsiinta Caalamiga ah. Iyadoo la tixgelinayo in dadka adduunka ku nool ay yihiin 7.841 milyan. in ka badan kala badh dadka aduunka ku nool (59,4%) waxay isticmaalaan intarneedka nolol maalmeedkooda.
Way cadahay taas internet waa a waa in nolosha dadka. Oo haddii ay u sheegi waayaan mid kasta oo naga mid ah, in ay noqotay lagama maarmaan in la xidho. Haddi ay tahay in aan la samayno wicitaan muuqaal ah asxaabtayada ama si fudud aan ugu raaxeysanay filimka qoyska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Ka shaqaynta dibadda: waa kuwee waddamada xawaaraha ugu sarreeya ee fiber-ka?
628a633819 la quudiyay